Programmer's Diary: အိုင်ဖုန်းနှင့် ကျွန်တော် (၂)
မျှော်တလင့်လင့်နှင့် စောင့်နေရသော အိုင်ဖုန်းသည် ရောက်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသောရက်ထက် နှစ်ရက်လောက် နောက်ကျပြီးမှ စင်္ကာပူသို့ ရောက်လာသည်။ လူကြုံသွားယူပြီးနောက် လေဆိပ်သို့ သွားရန်ရှိသဖြင့် လေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေရင်း အသင့်ယူလာသော လက်ကိုင်ကွန်ပျူတာမှ တဆင့် လိုအပ်သည့် ဆော့ဝဲလ် (iLiberty+) ကို လေဆိပ်တွင်ရှိသော Free Public Wireless စနစ်နှင့် ချိတ်ဆက် ထည့်သွင်းကာ အိုင်ဖုန်းကို အသုံးပြုနိုင်ရန် စတင်လုပ်ဆောင် ရတော့သည်။ အိုင်ဖုန်းကို စပြီး ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် Apple ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သော iTunes မှတဆင့် ချိတ်ဆက်ရန် အချက် ပြနေသည်။ ပုံမှန် အတိုင်းဆိုရင်တော့ iTunes ကို ဖွင့် AT & T ဖုန်းကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် ၂ နှစ် စာချုပ် ချုပ်ကာ Activate လုပ်လိုက်ရုံပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် စင်္ကာပူတွင် AT & T မရှိ။ ကျွန်တော် သုံးသည့် မိုဘိုင်း SIM Card က Starhub ကုမ္ပဏီမှ ဖြစ်သည်။ အင်တာနက် စာမျက်နှာများ ဖိုရမ်များတွင် ကြိုတင်လေ့လာထားပြီး ဖြစ်သည့်အလျှောက် လိုအပ်သည်တို့ကို ဆက်တိုက်လုပ်လိုက်သည်။ iLiberty+ ကို လက်ကိုင်ကွန်ပျူတာထဲသို့ ထည့်သွင်း၊ iTunes ကို ဖွင့်ထား၊ အိုင်ဖုန်းကို USB Cable မှ တဆင့် လက်ကိုင်ကွန်ပျူတာသို့ ချိတ် အဆင့်ဆင့် လုပ်ပြီးသည့်နောက် iLiberty+ တွင် လိုအပ်သည်များကို ရွေးချယ်ကို အိုင်ဖုန်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းလိုက်သည်။ ထိုသို့ မထည့်ခင် ပျက်သွားရင် ဒုက္ခပဲဟူသည့် အသိက ၀င်လာသေးသည်။ သို့သော် ပျက်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူးဟု တွေးကာ စိတ်ဒုံးဒုံးချရင်း ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ စောင့်ကြည့်ရသည်။ အိုင်ဖုန်းကို hack မလုပ်ခင် သုံးလေးရက်လောက်ကပဲ ကိုဖြိုး၏ iPod Touch ကို အောင်မြင်စွာ hack နိုင်ရန်အတွက် ဘာလုပ်ရမယ် ညာလုပ်ရမယ်ဆိုကာ ဂျီတော့ခ်မှတဆင့် ဆရာကြီး လုပ်လိုက်သေးသည်။
ထိုသို့ ထည့်သွင်းနေစဉ် ကွန်ပျူတာ၏ Dos Prompt ထဲ ရောက်နေသလို အိုင်ဖုန်း ဖန်သားပြင်၏ အမည်းရောင် နောက်ခံတွင် အဖြူရောင် စာများ ဟိုပြေး ဒီလွှားဖြစ်နေသည်။ Activation Completed... Jail break successful... YouTube Fix Done.. Installer App installed စသဖြင့် ရွေးချယ်ထားသမျှများကို ဆော့ဝဲလ်က တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထည့်သွင်းနေသည်။ အားလုံးပြီးသွားတော့ ဖုန်းက သူ့အလိုလို ပိတ်သွားသည်။ ထို့နောက် ကမ္ဘာလုံးပုံနှင့်အတူ Slide To Unlock ဆိုတာ ပေါ်လာသည်။ အိုကေမှာ စိုပြေသွားပြီ။ SIM Card မထည့်ရသေးသဖြင့် ဖုန်းပြောလို့ မရသေးတာက လွဲရင် ကျန်သည့် Function များ အကုန် သုံးလို့ ရနေပြီ။ သို့သော် အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ဒုက္ခတွေ့တော့သည်။ ဖုန်းကို မည်သည့် SIM Card နှင့် မဆို သုံးနိုင်စေရန် unlock လုပ်နည်း၊ Activate လုပ်နည်း၊ Jailbreak လုပ်နည်း စသဖြင့် အကုန် ကြိုတင်လေ့လာထားသော်လည်း SIM Card ကို ဘယ်က ဘယ်လို ထည့်ရမလဲ မသိသဖြင့် ရွာပတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်တော့ အိုင်ဖုန်းသုံးနေသည့် ယောက်ဖဆီ လှမ်းမေးလိုက်မှပဲ ဘယ်လို ထည့်ရမလဲ သိသွားသည်။ ဒါနဲ့ paper clip တစ်ခု ရှာ.. ဖွင့်ပြီး ထည့်လိုက်တော့ အိုကေ သွားသည်။ အဟား.. ထိုသို့ဖြင့် အိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ၂ ရက် ၃ ရက် အလုပ်ရှုပ်နေတော့သည်။ ဟို application လေး ထည့်လိုက် ဒီ application လေး ထည့်လိုက်နှင့် ကစားစရာတစ်ခု ရသလို လက်က မချနိုင် ဖြစ်နေတော့သည်။ ဖုန်းရပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ကလိလွန်းသောကြောင့် ၁ ခေါက် crush သွားသဖြင့် သံလွင်အိပ်မက်ထွက်ခါနီး အလုပ်များနေသည့်ကြားက အကုန် ပြန်ပြီး restore လုပ်လိုက်ရသေးသည်။ အတွေ့အကြုံရတာပေါ့ဟု ဖြေသိမ့်ရသည်။
အရင်က ရုံးရောက်မှ အီးမေးလ်စစ်သည်။ မနက်နိုးနိုးချင်း ကွန်ပျူတာဖွင့်နေလျှင် ကြာနေမည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခုတော့ မနက် နိုးနိုးချင်း အိုင်ဖုန်းကနေ တဆင့် အရေးတကြီး အီးမေးလ်ဝင်မ၀င် စစ်တတ်နေပြီ။ ညက ညဉ့်နက်နက်ကန်သဖြင့် မကြည့်ဖြစ်လိုက်သည့် ဘောလုံးပွဲများရှိလျှင်လည်း ပွဲရလဒ်ကို Safari Browser မှ တဆင့် ကြည့်ဖြစ်ပြီ။ အလုပ်သွားခါနီး ရေချိုးနေတုန်း ဖုန်းကို ဘက်ထရီအားသွင်းရင်း တခါတည်း Subscribe လုပ်ထားသည့် Pod Cast များကို Sync လုပ်ထားလိုက်သည်။ ရုံးအသွား ရထားပေါ်တွင် သီချင်းနားထောင်ချင်ထောင် Sync လုပ်ထားသည့် Pod Cast အသစ်များကို နားထောင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာသတင်းဆိုလျှင် RFA Pod Cast ကနေ တဆင့် နားထောင်ရန် အသင့်။ BBC Pod Cast... CNN News Pod Cast များကလည်း နားထောင်ရန် ဖုန်းအတွင်းသို့ သူ့အလိုလို ၀င်နေပြီ။ ကမ္ဘာကြီးသည် အရင်ကထက် ပိုမို နီးကပ်လာသလို ခံစားရသည်။ သတင်းများ၊ Pod Cast များ နားမထောင်ချင်ရင် သီချင်းများ နားထောင်ချင် နားထောင်၊ YouTube ကနေတဆင့် Offline ကြည့်နိုင်ရန် MxTube Application နှင့် Download လုပ်ထားသည့် MTV တွေ ကြည့်၊ ဒါမှ မဟုတ် Chess ထိုးချင်ထိုး၊ Sudoku ဆော့ချင်ဆော့ လုပ်နေတတ်ပြီ။ Project Gutenberg မှ ဖန်တီးပေးထားသည့် copy rights ကျော်လွန်ကာ public domain သို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည့် စာအုပ်များကလည်း eBook Viewer နှင့် ဖတ်ရန် အသင့်။ လောလောဆယ်တော့ Napolean Hill ၏ စာအုပ် ဖြစ်သည့် Think & Grow Rich ကို ဖတ်နေသည်။ ကက်ဖ်ကာ၏ ၀တ္ထုတိုများ၊ ဆွန်ဇူး၏ Art of War၊ ဂျက်လန်ဒန်၏ အရိုင်းခေါ်သံ၊ လီယိုတော်စတွိုင်း၏ စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး စသဖြင့် အလကားရတိုင်း ထည့်ထားသော စာအုပ်တွေ များနေပြီ။ အရင်က ညအိပ်ခါနီး အိပ်ရာပေါ်နေရာယူတတ်သော လက်ကိုင်ကွန်ပျူတာလေး အခုတလော အနားရနေတာ ကြာပြီ။ ညအိပ်ခါနီးလျှင် အိုင်ဖုန်းလေး တကိုင်ကိုင်ဖြင့် ၀ယ်နိုင်တာလည်း မဟုတ်ဘဲ လျှောက်ထည့်ထားသော ကုမ္ပဏီအချို့၏ စတော့ခ်အတက်အကျကို ဘာရယ်မဟုတ်ကြည့်သည်။ သြော်.. Google ရှယ်ယာတွေ တက်ပြီးရင်း တက်နေပြန်ပြီ။ ပြီးတော့ မိုးလေ၀သအခြေအနေ ကြည့်သည်။ ရန်ကုန်မှာ ဒီနေ့ မိုးရွာတာပဲ။ ၂၅ ဆိုတော့ အေးမှာပေါ့။ စင်္ကာပူကတော့ နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ပူနေတာပဲ။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီဘက်တော့ အေးတုန်းပဲ စသဖြင့် အားအားယားယား ကြည့်နေတတ်ပြီ။ မြန်မာဘလော့တွေ ဖတ်ကြည့်တော့ လေးထောင့်တွေချည်း ပေါ်နေသဖြင့် ခုထိဖတ်လို့ မရသေးပါ။ ဇော်ဂျီကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးရှိသမျှ နေရာတိုင်းမှာ လိုက်ထည့်သော်လည်း မအောင်မြင်သေး။ ဇော်ဂျီရိုးရိုးသာမက ဇော်ဂျီ Arial ကိုလည်း စမ်းပြီးပြီ။ မရ။ တခါတလေတော့ အိုင်ဖုန်းကနေတဆင့် ဂျီတော့ခ်ထဲ ၀င်ပြီး ချက်ချင်လည်း ချက်နေတတ်သည်။ အိုင်ဖုန်းတွင် လွယ်လွယ်ကူကူ Ringtone ကို သီချင်းထည့်လို့ မရအောင် ဘာလို့များ လုပ်ထားမှန်းတော့ မသိ။ အင်တာနက်ထဲ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်ပြီး ရအောင် လုပ်လိုက်တော့လည်း ရသွားသည်။ သိသွားတော့လည်း လွယ်လွယ်လေးပဲ။ Install လုပ်ထားသည့် application တွေ များလွန်းသဖြင့် လေးမျက်နှာလောက် ဖြစ်နေပြီ။ နဂိုအတိုင်း ပါတာမှ application က ဆယ်ခုလားပဲ ပါသည်။ အခုတော့ တစ်မျက်နှာကို ၁၆ခုနှုန်းနှင့် အခု လောလောဆယ်ထည့်ထားတာ ၅၅ခု ရှိသည်။ အဟဲ.. သိပ်မများပါဘူး။ Nitendo Emulator ထည့်ပြီး ဂိမ်းတွေ ထည့်ကာ ကစားကြည့်သေးသော်လည်း သိပ်လက်မတွေ့သဖြင့် ပြန်ဖြုတ်လိုက်သည်။ သူ့နဂိုအတိုင်း ပါသည့် built-in ကင်မရာက Digital Zoom မရသဖြင့် Digital Zoom ရသည့် application တစ်ခု ထပ်ထည့်ထားသည်။ နဂိုက ဗီဒီယိုရိုက်လို့ မရ.. အသံဖမ်းလို့ မရ .. Screenshot ရိုက်ချင် ရိုက်လို့မရ။ ရအောင် ဖန်တီးလိုက်တော့လည်း ရနေပြန်သည်။ ဒါပဲ .. နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ ဘာဆိုဘာမှ တားဆီးလို့ မရ။ ကြိုက် ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် နည်းပညာလှိုင်းလုံးကြီးတွေကတော့ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ၀င်ရိုက်မှာ အသေအချာပင်။ ဒါကို ကိုယ်က အလိုက်အထိုက် လိုက်သွားဖို့သာ ရှိတော့သည်။ အခုတလော ဟစ်ဖြစ်နေသည့် အဆိုတော် Leona Lewis ၏ Bleeding Love ကို Ringtone ပြောင်းထားသဖြင့် ဖုန်းသံမြည်လျှင် Keep Bleeding .. Keep Bleeding ဟု မြည်နေသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ထိုအသံကြားတိုင်း Keep Dreaming .. Keep Dreaming လို့ပဲ ကြားနေသည်။ သိပ္ပံဇာတ်ကားတွေထဲ မြင်ဖူးတွေ့ဖူးသည့်အရာတွေသည် အိပ်မက်သက်သက် မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ဖြစ်လာနေတာတော့ အသေအချာပဲ ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့ကျရင်တော့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်နေကို နေဦးမည်။ ထိုအိပ်မက်သည် လက်တွေ့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဟု ပြောမလား။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ညီညွတ်ဖို့သာ လိုပါသည်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:33 PM
bro, i alsoaapple fun!
can share some game wif me and other useful stuffs, maybalink that i can read?
Please write to more Iphone and Ipod Touch.May I konw, can crack Ipod Touch also?